Pneumatic Actuator ဖြင့် Wafer Butterfly Valve | Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။ | PTFE ထိုင်ခုံပါသော Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve | လက်ကိုင်ပါရှိသော Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve | ဂီယာဖြင့် Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve | Stainless Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve | Iron Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve | Carbon Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve
Stainless Steel Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve | Pneumatic Actuator ဖြင့် Lug Butterfly Valve | Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။ | Lug Type Butterfly Valve PTFE ထိုင်ခုံ | Lug Type Butterfly Valve With Handle | Lug Type Butterfly Valve With Gear | Iron Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve | Carbon Steel Lug အမျိုးအစား Butterfly Valve
PTFE ထိုင်ခုံဖြင့် Flange Butterfly Valve | Iron Centric Flange Butterfly Valve | Rubber Lined Flange Butterfly Valve | U Type Flange Butterfly Valve
Pneumatic Actuator ဖြင့် Eccentric Butterfly Valve | Eccentric Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။ | Flange Eccentric Butterfly Valve | Wafer Eccentric Butterfly Valve | ကာဗွန်သံမဏိ Offset Butterfly Valve | သတ္တုထိုင်ခုံ Eccentric Butterfly Valve | ခံနိုင်ရည်ရှိသော Eccentric Butterfly Valve | Iron Eccentric Butterfly Valve | Triple Offset Butterfly Valve | Double Eccentric Butterfly Valve
BS5163 Resilient Seat Gate Valve | F5 Resilient Seat Gate Valve | F4 Resilient Seat Gate Valve | Stem Resilient Seat Gate Valve တက်လာခြင်း။ | Non Rising Stem Resilient Seat Gate Valve
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ဖြင့် သတ္တုထိုင်ခုံတံခါးဝဲလ် | Flange Metal Seat Gate Valve | Stem Brass Seat Gate Valve တက်လာခြင်း။ | BS5163 Metal Seat Gate Valve | F5 Metal Seat Gate Valve | F4 Metal Seat Gate Valve | Stem Metal Seat Gate Valve တက်လာခြင်း။ | Non Rising Stem Brass Seat Gate Valve
Unidirectional Knife Gate Valve | Bidirectional Knife Gate Valve | Stem Knife Gate Valve တက်လာခြင်း။ | Non Rising Stem Knife Gate Valve
Flanged Swing Check Valve | Rubber Seat Swing Check Valve | Metal Seat Swing Check Valve | Carbon Steel Swing Check Valve | Iron Swing Check Valve
DIN Dual Plate Check Valve | ANSI Dual Plate Check Valve | Stainless Steel Dual Plate Check Valve | Iron Dual Plate Check Valve
Valve အမျိုးအစား Method of valve figure number ကိုယ်စားပြုမှု | Valve ရွေးချယ်မှု | Valve အမျိုးအစားနှင့် မော်ဒယ်နံပါတ် | ရော်ဘာတန်းစီထားသော Flange Butterfly Valve ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် | Rubber Lined Flange Butterfly Valve ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အားသာချက်များ | Flanged Butterfly Valves များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အားသာချက်များ | Triple Offset Butterfly Valve ၏ လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာ | Flange Butterfly Valve ၏ရွေးချယ်မှုအမှတ်များ | Butterfly Valve ၏ အခန်းကဏ္ဍ | Iron Centric Flange Butterfly Valve ၏ ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းရည် | Pneumatic Actuator ဖြင့် Wafer Butterfly Valve ၏ လျှောက်လွှာနှင့် အားသာချက်များ | Triple Offset Butterfly Valve ကိုအသုံးပြုခြင်း။ | Flanged Butterfly Valves တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ | Electric Actuator ဖြင့် Eccentric Butterfly Valve တပ်ဆင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ | Butterfly Valve Seat ပျက်စီးရခြင်း အကြောင်းအရင်း | Flange Eccentric Butterfly Valve နှင့် Wafer Eccentric Butterfly Valve တို့၏ ကွာခြားချက် | Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve သည် Electric Actuator ပါရှိသည်။ | Knife Gate Valve ၏ဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများ | Pneumatic Butterfly Valves များ၏ အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများ | Pneumatic Butterfly Valve ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ | ခြေထောက်အဆို့ရှင်၏နိဒါန်း | ခြေဖဝါးအဆို့ရှင်၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လက္ခဏာ(၁)၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားအရ စက်ပစ္စည်းကို သင် ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသလား။ | သင့်ကုမ္ပဏီသည် ဤစက်ပစ္စည်းမျိုးကို နှစ်မည်မျှပြုလုပ်ခဲ့သနည်း။ | သင့်စက်ပစ္စည်းအတွက် မည်သည့် Certificate ရှိပါသလဲ။ | သင့်စက်ရုံတွင် ဝန်ထမ်းမည်မျှရှိသနည်း။ | သင့်တွင် စက်ပစ္စည်းများ၏ တကယ့်ပရောဂျက်ပုံများ ရှိပါသလား။ | မင်းရဲ့စက်ရုံက City Hotel နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။ | မင်းရဲ့စက်ရုံက လေဆိပ်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။ | မင်းရဲ့စက်ရုံက လေဆိပ်နဲ့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။ | မင်းရဲ့စက်ရုံက ဘယ်မှာလဲ။ | မင်းရဲ့စက်ရုံက ဘယ်မှာလဲ။ | အပိုအပိုပစ္စည်းများ အခမဲ့ပေးပါသလား။ | သင့်တွင် အသေးစိတ်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ် ရှိပါသလား။ | Oem ကိုလက်ခံနိုင်ပါသလား? | Oem ကိုလက်ခံနိုင်ပါသလား? | နမူနာပေးပါသလား။ အခမဲ့ သို့မဟုတ် အခကြေးငွေ ? | သင့်ငွေပေးချေမှု စည်းမျဉ်းကဘာလဲ။ | မင်းရဲ့ Moq ဆိုတာဘာလဲ။ | သင်သည် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား။ | မင်းရဲ့ Delivery အချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ | မင်းရဲ့စက်ရုံမှာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။